ary mangataka ny handraisana fepetra mifanandrify amin’ny zava-misy. Mbola voahitsakitsaka mantsy ny zon’ireo ankizy ahiana ho ôtista sy ny an’ireo fianakaviany, araka ny tatitra nataon’ny dokotera Pierre Sans sy ny fikambanana Autisme Madagascar, omaly teny amin’ny foiben’ny fikambanana eny Mahatony Ivandry. Tsikaritr’izy ireo izany, nandritra ny fitiliana natao, tao anatin’ilay tetikasa Opération Blue, notanterahina nanomboka ny 6 jolay lasa teo ary hifarana rahampitso 26 jolay. Misy amin’ireo dokotera, hoy ny nambaran’ny avy ao amin’ny fikambanana, no manome valim-pitiliana diso sy manome fanafody tsy mifanaraka amin’ny tranga mahazo an’ilay ankizy. Misy mihitsy aza no manararaotra amin’ny fampanoavana fitiliana tsy ilaina akory ary tsy manome fanazavana ampy sy mitombina amin’ireo ray aman-dreny. Maro amin’ireto farany moa no mahazo tsiny be fahatany, toy ny fanaovana antsirambina ny zanany. Ankizy 22 teto Antananarivo, 11 tany Toamasina ary 9 tany Fenoarivo Atsinanana no notilian’ity dokotera frantsay manampahaizana momba ny saina ity, maimaimpoana, niaraka tamin’ireo mpilatsaka an-tsitrapon’ny Autisme Madagascar ary notohanan’ny vondrona FILATEX.